ယုန်လေး အကူအညီ နဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် ရန်ကုန်မြို့ကိုလာပြီး သီချင်း ဖန်တီးခွင့်ရတော့မယ့် Min Z – Let Pan Daily
ယုန်လေး အကူအညီ နဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် ရန်ကုန်မြို့ကိုလာပြီး သီချင်း ဖန်တီးခွင့်ရတော့မယ့် Min Z
မိသားစုရဲ့ ဝန်ကိုထမ်းရင်း ဝါသနာပါရာ ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားနေသူလေးကတော့ မင်းZ ပါ။ မင်းZ ကိုတော့ Covid-19 ကာလ အဆိုတော်တွေကစတင်လိုက်တဲ့ Rap Challenge မှာ သူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Rap ရွတ်ခဲ့ရာမှ ပရိသတ်တွေစတင် သတိထားမိ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူ့နောက်မှာ သူစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့မိသားစုက ရှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားလေးကတော့ ပရိသတ်ရင်ကို ထိစေခဲ့ပြီး ဝါသနာရှင်တွေကို ဖေးမကူညီတတ်သူယုန်လေးကတော့ မင်းZ ကိုအကူညီပေးကာ လက်ကမ်း ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယုန်လေး ၊မင်းZ နဲ့ ကျော်စွာ တို့ပေါင်းပြီး “ဝမ်းစာ” သီချင်းလေးကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ကြည့်ရှူအားပေးသူ ငါးနာရီအတွင်း တစ်သန်းရရှိခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းစာသီချင်းတုန်းကတော့ Stay Home ကာလမို့ မင်းZ ကိုမန္တလေးမြို့ကမှာပဲ အသံသွင်းစေခဲ့ပြီး အခုတစ်ခေါက် မှာတော့ မင်းZ တစ်ယောက် ရန်ကုန်မြို့ ကိုလာပြီး သီချင်းသွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းZ နဲ့ပတ်သက်ပြီး “ကြိုဆိုပါတယ် ညီလေးရေ . ရန်ကုန်ကိုလာဖို့နိုင်ငံခြား သွားသလို မိဘတွေ အလေးထားပြီး လေဆိပ်အထိ မိသားစုတွေ လိုက်ပို့ ပေးတာတွေတော့ ပိုပြီး ပီတိဖြစ်ပါတယ် . စိတ်ကူး သီချင်းလေးကို အကောင်ထည်ဖို့ Min Z တစ်ယောက် ရန်ကုန်လာပါပြီ . ဆေးစာတွေ ထောက်ခံစာတွေ အကုန်ယူပြီးတရားဝင်လာတာပါ ခင်များ . ငါတို့ ညီအစ်ကိုတွေ စိတ်ကူး တွေအကုန် အကောင်ထည်ဖော်ကြစို့ ” ဆိုပြီးယုန်လေး ကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီး
မင်းZ ကတော့ လေဆိပ်ကပုံလေး နဲ့အတူ “အမေ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တာ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတော့ စိတ်မချလို့တဲ့… မှာလိုက်တာတွေလည်း စုံနေပါရော ကိုယုန်လေးဖို့တဲ့ လေဆိပ်ရောက်မှ ဘယ်ကထွက်လာမှန်းမသိဖူး… ထိုးမုန့်တွေ အဖေက လည်း ဆရာစကားကိုနားထောင်တဲ့…ကျွန်တော်တို့ ညီအကို(၃) ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးလေး ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးခွင့်ရတော့မှာပေါ့ ဗျာ ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေ ခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ပထမဆုံးအကြိမ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို လာမယ့် မင်းZ တစ်ယောက်တော့ ရန်ခုန်နေလောက်ပြီထင်ပါရဲ့နော်။ စိတ်အား ထက်သန်စွာ နဲ့ သုံးယောက်ပေါင်း ဖန်တီးကြဦးမယ့် “စိတ်ကူး” သီချင်းလေးထွက်လာရင် အားပေးကြဖို့ အသင့် ပဲမလား။
Source – Yone Lay, Min Z
ယုနျလေး အကူအညီ နဲ့ ပထမဆုံး အကွိမျ ရနျကုနျမွို့ကိုလာပွီး သီခငျြး ဖနျတီးခှငျ့ရတော့မယျ့ Min Z
မိသားစုရဲ့ ဝနျကိုထမျးရငျး ဝါသနာပါရာ ဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးဖို့ကွိုးစားနသေူလေးကတော့ မငျးZ ပါ။ မငျးZ ကိုတော့ Covid-19 ကာလ အဆိုတျောတှကေစတငျလိုကျတဲ့ Rap Challenge မှာ သူ့ဘဝရဲ့အကွောငျးအရာတှကေို Rap ရှတျခဲ့ရာမှ ပရိသတျတှစေတငျ သတိထားမိ ခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူ့နောကျမှာ သူစောငျ့ရှောကျပေးနရေတဲ့မိသားစုက ရှဈယောကျရှိတယျဆိုတဲ့သီခငျြးစာသားလေးကတော့ ပရိသတျရငျကို ထိစခေဲ့ပွီး ဝါသနာရှငျတှကေို ဖေးမကူညီတတျသူယုနျလေးကတော့ မငျးZ ကိုအကူညီပေးကာ လကျကမျး ကွိုဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ယုနျလေး ၊မငျးZ နဲ့ ကြျောစှာ တို့ပေါငျးပွီး “ဝမျးစာ” သီခငျြးလေးကို ဖနျတီးခဲ့ပွီး ကွညျ့ရှူအားပေးသူ ငါးနာရီအတှငျး တဈသနျးရရှိခဲ့တဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ဝမျးစာသီခငျြးတုနျးကတော့ Stay Home ကာလမို့ မငျးZ ကိုမန်တလေးမွို့ကမှာပဲ အသံသှငျးစခေဲ့ပွီး အခုတဈခေါကျ မှာတော့ မငျးZ တဈယောကျ ရနျကုနျမွို့ ကိုလာပွီး သီခငျြးသှငျးရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျလာနပွေီဖွဈတဲ့ မငျးZ နဲ့ပတျသကျပွီး “ကွိုဆိုပါတယျ ညီလေးရေ . ရနျကုနျကိုလာဖို့နိုငျငံခွား သှားသလို မိဘတှေ အလေးထားပွီး လဆေိပျအထိ မိသားစုတှေ လိုကျပို့ ပေးတာတှတေော့ ပိုပွီး ပီတိဖွဈပါတယျ . စိတျကူး သီခငျြးလေးကို အကောငျထညျဖို့ Min Z တဈယောကျ ရနျကုနျလာပါပွီ . ဆေးစာတှေ ထောကျခံစာတှေ အကုနျယူပွီးတရားဝငျလာတာပါ ခငျမြား . ငါတို့ ညီအဈကိုတှေ စိတျကူး တှအေကုနျ အကောငျထညျဖျောကွစို့ ” ဆိုပွီးယုနျလေး ကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပွီး
မငျးZ ကတော့ လဆေိပျကပုံလေး နဲ့အတူ “အမေ ကိုယျတိုငျလိုကျပို့တာ တဈခါမှမရောကျဖူးတော့ စိတျမခလြို့တဲ့… မှာလိုကျတာတှလေညျး စုံနပေါရော ကိုယုနျလေးဖို့တဲ့ လဆေိပျရောကျမှ ဘယျကထှကျလာမှနျးမသိဖူး… ထိုးမုနျ့တှေ အဖကေ လညျး ဆရာစကားကိုနားထောငျတဲ့…ကြှနျတျောတို့ ညီအကို(၃) ယောကျရဲ့ စိတျကူးလေး ပွညျ့စုံအောငျ ဖနျတီးခှငျ့ရတော့မှာပေါ့ ဗြာ ” ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝေ ခဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ… ပထမဆုံးအကွိမျရနျကုနျမွို့ကွီးကို လာမယျ့ မငျးZ တဈယောကျတော့ ရနျခုနျနလေောကျပွီထငျပါရဲ့နျော။ စိတျအား ထကျသနျစှာ နဲ့ သုံးယောကျပေါငျး ဖနျတီးကွဦးမယျ့ “စိတျကူး” သီခငျြးလေးထှကျလာရငျ အားပေးကွဖို့ အသငျ့ ပဲမလား။
အသကျအန်တရာယျ ရှိနိုငျပမေယျ့ ဘယျသူ့ခှငျ့ပွုခကျြမှ မပါဘဲ မှနျတယျထငျ လို့ လုပျနတောဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လကျရှိအခွအေနတှေကေို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျတံခှနျ
Lockdown ကာလ အပြီး အနုပညာသမား တစ်ယောက် ရဲ့ အခြေအနေ ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကျော်ကျော် ရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေး
ကိုယ်ပိုင် အဝတ်စားတချို့ကို ရှင်ငြိမ်း မယ်ဂေဟာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် တွေ အတွက် လှူဒါန်းပေး ခဲ့တဲ့ “သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ ဖွေးဖွေး ၊ သုသု”